February 2019 – Blogs, Books, Articles
February 27, 2019 Tulasi Acharya
उ जति बेला पनि आउन सक्छ,
तिम्रो प्रस्वासमा आएर अल्झिन सक्छ
तिमी सुतेको बेला, सुरुप सुरुप चिया पिएको बेला
बिहान घाम उदाएको बेला, गुंधुली साँझमा
चरा चिरबिराएको बेला,
जुनी जुनी बाच्ने कसम खाएको बेला,
बादल मडारिएको बेला,
दिन खुलेको बेला,
घरमा गाई ब्याएको बेला
“समृद्धि ” आएको छ!
February 23, 2019 Tulasi Acharya
पदमप्रसाद भट्टराई , झापा हाल :- कतार “समृद्धि ” आएको छ, छाएको छ। बिजुलीका पोलैपिच्छे दिनैपिच्छे, भाषण पिच्छे आएको आएकै छ। पोस्टर बनेर आएएको छ।
सुन्ने कबिता: उ अगी अगी, म पछि पछि
February 22, 2019 Tulasi Acharya
म भित्रको मुटु
म भित्र नबसे पछि
म भित्र नधड्के पछि
म उसलाई पछ्याउछु ।
उ अगी अगी
म पछि पछि
शेक्सपियरका महत्वपूर्ण कथाहरु
February 21, 2019 Tulasi Acharya
शेक्सपियरका महत्वपूर्ण कथाहरुको अनुबाद मैले यस पुस्तकमा गरेको छु । यो पुस्तकमा दि टेम्पेस्ट, अ मिड्समर नाइट्स ड्रिम, दि विन्टर’स टेल, दि टेमिङ्ग अफ दि स्रिउ लगायत १० वटा कथाहरु छन्।
मेरि जुत्ता हे जापानी !
February 20, 2019 Tulasi Acharya
लागिरह्यो कहिले सम्म म यो गित गाइराखुँ “मेरा जुत्ता हे जापानी, ये पतलुन इन्ग्लिश्तानी, सिर पे लाल टोपी रुस्सी, फिर भी दिल हिन्दुस्तानी” । कहिले सम्म टोलाईरहुँ ? मैले मेरो भूगोल मन पराउनु भनेको अति राष्ट्रबाद होइन, न म बसेको बिदेसीभुमि प्रतिको घृणा नै हो । म जन्मेको भूगोलको चाहाना राख्नु भनेको त्यो माटो , त्यहाँका जनताको सम्मान हो । आफु जन्मेको भूगोलमा रम्नु भनेको युद्द जित्नु सरह हो । अन्त्यमा, मेरो पहिचान नै यहि हो ।